China Pueraria lobata inobvisa mvura yakasungunuka puerarin 10% fekitori nevatengesi | Shaanxi Green Bio-Injiniya
Mune cosmetics munda, iyo phytoestrogen mhedzisiro ye puerarin inogona kubvisa chiratidzo chinokonzerwa nekuderera kweserogen chikamu uye kuchembera, senge mastoptosis, crinkle, kuderera kwehunhu hweganda uye leukotrichia. Nekudaro, inowanzo shandiswa mukamu yemazamu, kirimu remaziso uye ganda rekirimu.
1.Pueraria inoshandiswa kuwedzera hutachiona uye inhibit cancer cancer;
2.Pueraria ine mashandisiro ekutora ekudzivirira mhedzisiro kune nephritis, nephropathy uye renal kutadza;
3.Pueraria naiye basa rekusimudzira myocardial contraction simba uye kuchengetedza myocardial cell;
4.Pueraria muridzi weanobudirira wekuchengetedza kuremara kwerythrocyte, achiwedzera basa rehematopoietic system.
1. Mumunda wezvekudya, puraria isoflavones inogona kushandiswa muzvikafu uye zvigadzirwa zvehutano, kudzikisa BP uye neropa-mafuta.
2. Mundima yemishonga, puraria isoflavones inoshandiswa zvakanyanya mu biopharmaceuticals uye API yemoyo yemaseru system vamiririri muChina. Semhando yemushonga wechiChinese injio, puerarin chinodhaka chinowanzoitika pamwoyo uye chirwere checebrovascular.
3. Mundima yezvizoro, phytoestrogen mhedzisiro ye puerarin inogona kubvisa chiratidzo chinokonzerwa nekuderera kweserogen uye kukwegura, senge mastoptosis, crinkle, kuderera kwehunhu hweganda uye leukotrichia. Nekudaro, inowanzo shandiswa mukamu yemazamu, kirimu remaziso uye ganda rekirimu.
4. Semushonga unodhaka wemishonga yemoyo, unoshandiswa zvakanyanya mu biopharmaceuticals;
5. Iine yakasarudzika mhedzisiro yekudzikisa lipid, inoshandiswa zvakanyanya kuwedzerwa muzvikafu uye zvigadzirwa zvehutano;
6. Iine yakasarudzika mhedzisiro ye phytoestrogen, inowanzo shandiswa mumazoro cosmetics kudzora hutete.
Basa re Shilajit powder
Inogadzirisa uye inodzora mashuga eropa uye inoratidza hypoglycemic chiito.
2.Inowedzera kukwana kwemasero membranes.
3.Iye inomhanyisa maitiro epuroteni uye nucleic acid metabolism.
4.Iyo inoshanda semahara radical scavenger uye inodzosera kukuvara kunoitwa neine chepfu zvinhu.
5.Iinobatsira kutakura zvinovaka muviri zvakadzikama munyama.
6.Iyo inodzorera electrochemical balance uye inotsigira immune system.
7.Iinosimudzira kufamba kwemaminerari, kunyanya calcium, phosphorus uye magnesium mumhasuru nyama nemapfupa.
Pashure: Shilajit kubvisa